Bandwidth Control လုပ်ချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Bandwidth Control လုပ်ချင်လို့ပါ
Vote Up0Vote Down aelthar April 2012 Posts: 20Registered Users ရုံးမှာ AP နှစ်လုံးနဲ့ Wifi လွင့်ထားပါတယ်.. AP တစ်လုံး ကလွင့်တဲ့ စက်တွေကို ကို Bandwidth သတ်မှတ်ချင်လို့ပါ... ISA မှာ အဲဒီလွင့်ထားတဲ့ AP ရဲ့ IP ကိုကန့်သတ်တာ မထူးဘူး.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးကြပါဦး MZ က ကိုကို မမတို့ရေ.......[email protected]	11 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down aelthar April 2012 Posts: 20Registered Users သိတဲ့အစ်ကိုတို့မမ တို့ပြောပေးကြပါဦး..................:(	Vote Up0Vote Down THIHA.MMCP April 2012 Posts: 79Registered Users Checking on AP and search on out bandwidth function !which one you use ? tell me brand !THIHA	Vote Up0Vote Down aelthar April 2012 Posts: 20Registered Users TPLINK TL-WA5210G ပါ ကိုသီဟ....	Vote Up0Vote Down aelthar April 2012 Posts: 20Registered Users ဟုတ်ကဲ့ ရှင်းသွားပီ.. ဟီး..... စကားမစပ်ကိုသီဟကို ထပ်မေးလိုက်ဦးမယ်... ကျွန်တော် Antamedia Hotspot ထိုင်ချင်ပါတယ်.. အခုသုံးနေတဲ့ Prolink နဲ့ ဘက်ထရီတွဲသုံးတဲ့ ဟာက မီးပျက်ရင် ကွန်ပျူတာ Restart ကျကျသွားလို့..... ဘာအမျိုးအစားသုံးရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး.. အကြံပေးပါဦးဗျာ....	Vote Up0Vote Down THIHA.MMCP April 2012 Posts: 79Registered Users လုံးဝမကောင်းပါ.. တခါတည်း မှတ်သွားပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ ဝယ်ထားပါတယ်.. ကိုယ်ကိုကအမှတ်မရှိတာ .. ခုနောက်ပိုင်း ကေအမ်ဒီ နဲ့ ဒီစီဒီ ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ပါတယ်.. လုံးဝအားမပေးတော့ဘူး.. လာမေးလဲ မကောင်းဘူးပဲ ပြောပါတယ်.. ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကောင်လဲ အဲ့လိုဖြစ်လို့ သွားပေးပါတယ်... ၂ ခါတောင်သွားပေးတယ်.. လုံးဝမကောင်းလာဘူး.. ထူးမခြားနားပဲ.. အခု အသစ်ထွက်နေတာတော့ တွေ့ခဲ့တယ်.. ဆိုက်ဘာပရို ဆိုလားပဲ... ၉ သောင်းဝန်းကျင်ပေးရတယ်.. သူလဲ အခုမှထွက်တာဆိုတော့ သိပ်အားမပေးချင်ဘူးဗျ..အကောင်းဆုံးက လင်းရာမ ဝယ်လိုက်... စိတ်ချရတယ်... စျေးတော့ နည်းနည်းများတယ်.. ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ပုံစုံက ဟော့စပေါ့ကို လတ်တော့နဲ့ထိုင်ထားတယ်.. အဟောင်းအစုတ်လေး.. ဘက်ထရီတောင် မထည့်ထားဘူး.. ကြားထဲမှာ ယူပီအက်စ် တလုံး ပြန်ခံပေးထားတယ်..ယူပီအက်စ်ကနေ အိတ်စတမ်းရှင်း ဘောက်စ် နဲ့ စီပီအီးတွေရော လက်တော့ ကိုပါ ပါဝါဒါရိုက်ကျွေးထားတယ်... မီးပျက်ရင် မန်ယူရယ် ပဲ မီးချိန်းပေးတယ်.. ညဖက်ပျက်ရင်တော့ အိပ်ရေးပျက်တာပေါ့.. ခက်တာက ပရိုလင့် ပြသနာကတခုထဲမဟုတ်ဘူးနော်..ကြာလာရင် ဘက်ထရီ အားပြည့်နေလဲ ဆက်သွင်းနေတယ်.. အော်တို မရပ်တော့ဘူး.. ကံကောင်းလို့ ဘက်ထရီ ကျွတော့မလို့ ... အခုလဲ ဘက်ထရီ က ၈၀ ရာနှုန်းလောက်ပဲ ကောင်းတော့တယ်.. ထပ်ဝယ်ဖို့က တလုံးကို ၁ သိန်း ၂ သောင်းလောက်ဆိုတော့ ထပ်လိုက်ရမှာ မကာမိဘူး.. ဝယ်ချင်ရင်တော့ လင်းရာမ ဝယ်ဗျို့... သီဟ	Vote Up0Vote Down aungkohein July 2012 Posts: 3Registered Users Antemedia Bandwidth Control Software ကိုဘယ်ဆိုဒ်က ဒေါင်းရမယ်ဆိုတာပြောပြကြပါအုန်းခင်ဗျာ....server ကနေဘယ်လို connection ကိုထိန်းချုုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာလဲ အကြံပေးအုန်းခင်ဗျာ	Vote Up0Vote Down volcanoapk November 2012 Posts: 9Registered Users Antamedia Bandwidth Control Software ကသုံၾကည့်သေးတယ် သိပ်မေကာင်းဘူး server ကထွက်သမျအကုန် ထိန်းတယ်server ကတစ်ခုခုကို copy ကူးလိုက်ရင်60kbs လို႔ပေးထားရင် အဲလောက်နဲ့ပဲကူးတယ် ဒါပေမယ့် ip တစ်ခုချင်းစီကို bandwidth control လုပ်လို႔ရတယ် မေကောင်းတာတစ်ခုရိႈသေးတယ် bandwidth control run ထားလိုက်ရင် တစ်ချားဘာမႈ run လို႔မရဘူး win7 အလုပ်မလုပ်ဘူး	Vote Up0Vote Down wailinkyaw December 2012 Posts: 1Registered Users Hello Ko ThihaWe want to know about using antamedia hotspot detail (tutorial) & download link . Vote Up0Vote Down wailinkyaw December 2012 Posts: 1Registered Users hello ko thihai want to know about using antamedia hotspot detail & software download link.Thank alot !	Vote Up0Vote Down thaung.mdy March4Posts: 17Registered Users Antamedia Hotspot is very good software for this problem.	Vote Up-1Vote Down THIHA.MMCP April 2012 Posts: 79Registered Users Antamedia Bandwidth Control Software သုံးကြည့်ဗျာ... မရရင်တော့ Antamedia Hotspot ထိုင်လိုက်... ယူဆာအကောင်တွေ ဖွင့်ပေးလိုက်.. အဲ့တာဆို ဘယ်သူ အွန်လိုင်းသုံးနေလဲ ဆိုတာလဲ ကြည့်လို့ရတယ်.. ဘန်းဝပ်လဲထိန်းလို့ရတယ်. :DTHIHA	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
April 2012 aungkohein
July 2012 thaung.mdy
March4THIHA.MMCP
April 2012 volcanoapk
November 2012 wailinkyaw